Madaxweyne ku xigeenka Puntland Eng. Camey oo dib ugu soo laabtay Caasimadda Puntland ee Garoowe – Radio Daljir
Maajo 10, 2015 9:03 b 0
Axad, May 10, 2015 (Daljir) — Madaxweyne ku xigeenka Dawladda Puntland Eng. Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey ayaa gelinkii dambe ee maanta dib ugu soo laabtay magaalada Garoowe ee caasimadda Dawladda Puntland, kadib safar shaqo oo maalmo kooban qaatay oo uu ku joogay magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug.
Madaxweyne Camey ayaa inta uu san ka soo ambabixin magaalada Gaalkacyo lakulmay Golaha deegaanka degmada Gaalkacyo, waxaana uu kala hadlay sidii ay dhankooda qeyb uga qaadan lahaayeen xaqiijinta amaanka iyo xasiloonada Gobolka Mudug.
Sidookale waxaa uu Madaxweyne ku xigeenku hoygiisu uu ku booqday Islaan Bashiir Islaan Cabdulle , intaa kadib waxaa uu si rasmi ah u kormeeray xarunta lagu qabanayo shirka wada tashiga Puntland oo ka dhacaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug.
Wasiiro, xildhibaano , waxgarad , aqoon yahan iyo masuuliyiin kale ayaa duleedka magaalada Garoowe ee caasimadda Dawladda Puntland si weyn ugu soo dhaweeyey madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland Eng. Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey iyo wefdigii uu hogaaminayey.
\_’\_’ Waxaan aad idiinka mahadcelin soo dhaweynta balaaran ee aniga iyo wefdigaygaba noo samayseen , waana soo nabad noqonay idinka Alle howlihii muhiimka ahaa ee aanu ka wadnay Gobolka Mudug si wanaagsan ayey noogu soo dhammaadeen \_’\_’ Ayuu yiri Eng. Camey.
Madaxweyne ku xigeenka Dawladda Puntland Eng. Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey intii uu ku sugnaa Gobolka Mudug waxaa uu kulamo kala duwan la qaatay Maamulka Gobolka iyo kan degmada Gaalkacyo, waxgarad , isimo iyo qeybaha kale duwan ee ku dhaqan Gobolka Mudug, dhammaan kulamadaasina waxaa ay ku soo dhammaadeen is afgarad.